” ဒကာ ဒကာမတို့ ဘုန်းကြီးရဲ့ ကျောင်းမှာ ဆွမ်းစားကျောင်းဆောင်လေးတစ်ခု ရှိရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ကွယ်။ ဆွမ်းစားကျောင်းလေးရှိတော့ အစုအမှုကိစ္စတွေမှာ မိုးလုံလေလုံ ကျွေးရမွေးရတာပေါ့။ ကျောင်းဆောက်လုပ်လှူရခြင်းဆိုတဲ့ ကုသိုလ်ဆိုတာကလည်း နည်းတဲ့ ကုသိုလ်မှ မဟုတ်တာ…။ လှူခွင့်ကြုံလို လှူရတန်းရတာ အားရဝမ်းသာဖြစ်ကြပါ။ ဆွမ်းစားကျောင်းဆောင် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်တော့ ဒကာကြီး ဦ့းကံမောင်က ရပ်ရွာလူကြီးဖြစ်တော့ ဦးဆောင်ပြီး ကြိုးပမ်းလိုက်ပေါ့။ ကျန်တဲ့လူတွေကလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါ။ အခုဆွမ်းစားကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဟာ ဘုန်းကြီးတို့ ရပ်ရွာအတွက် ကောင်းကျိုး တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကို လုပ်ဆောင်ကြတာမို့ သာဓုခေါ်စရာ ကိစ္စမို့ ဘုန်းကြီး သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ပဲ တိုင်တိုင်ပင်ပင် စည်းစည်းလုံးလုံး ဆောင်ရွက်ကြပါ။ ဘုန်းကြီးကတော့ ဒီလောက်ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ”
“ဥက္ကဋ္ဌကြီးက ဘယ်လိုအကြံအစည်ရှိတာလဲဗျ … ရှင်းပြပါဦး ”
“ဒီလို … မြမောင်ရ …. ငါတို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ ကလမ်းမကြီးရှိတယ်လေ …။ ကျောင်းရှေ့က ရေချမ်းစင်လေးဘေးမှာ မြေကွက်လပ်လေးလည်း ရှိနေတာပဲ။ အဲ့ဒီမြေကွက်လပ်မှာ အလှူခံမဏ္ဍပ်လေးဆောက်ပြီး မနက်ကနေ ညနေအထိ အလှူခံမယ်ကွာ..။ အလှူခံမှာ ဆုတောင်း ဆုပေးကတော့ ငါတို့အဖွဲ့က နာယကကြီးလည်းဖြစ် ပန်းတကာလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးသာရင်ကို ဦးဆောင်ခိုင်းလိုက်မယ်ကွာ …။ အလှူခံဖို့အတွက် အသံချဲ့ စက်ကတော့ ရွာပိုင် စက်ကို သုံးကြတာပေါ့။ လျှပ်စစ်မီးကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကနေ သွယ်မယ်ကွာ။ ဒီလမ်းမကြီးက လူအမြဲရှိနေတာပဲ သွားရင်း လာရင်း လှူကြတန်းကြမှာပါ။ ”
” ဟား အကြံကောင်းပဲ ဥက္ကဋ္ဌကြီးရ …. အမြန်ဆုံးသာ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တော့ဗျာ ….. ”
“သာဓု … သာဓု … သာဓု …. မင်္ဂလာမနက်ခင်းမှာ ခရီးသည်တစ်ဦးက တကယ်ပြတ်တဲ့ စေတနာနဲ့ အလှူငွေ နှစ်ရာကျပ်ကို လှူဒါန်းပါတယ် ခင်ဗျ … စေတနာ သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာ လှူဒါန်းရတဲ့ အကျိုးအားကြောင့် သွားလမ်းသာ လာလမ်းဖြောင့်ပြီး ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်ပါစေခင်ဗျား ”
“အရှေ့အရပ်၌ ရှိသော အနန္တစကြ်ာဝဠာ အနန္တသတ္တဝါတို့ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ … ”